Data Entry | Netcore Internet ﻿
17.8.2019, Full time , Telecommunications
Company: Netcore Internet
•	Computer, Internet, Email ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ISP လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
•	လစာ အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ညှိနှိုင်းမည်။
•	အသက် ၂၀ နှစ်အထက်ရှိရမည်။
•	အမှန်တကယ် Interview ၀င်နိုင်သူ များသာလျှောက်ထားရန်။
Work location တိုက် (၄)၊ အခန်း (၃)၊ မြေညီထပ်၊ အောင်မေတ္တာလမ်း၊ ကြီးပွား ရေးအိမ်ရာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် (သုဝဏ္ဏ)။, Thingangyun, Yangon
Company Industry: Telecommunicatons
•	Company နှင့် အနည်းဆုံး(၁)နှစ် လက်တွဲ လုပ်ကိုင်ပေးရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍အလုပ်ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိရမည်။ •	နေရာ - သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် အလုပ်ဆင်းပေးရမည်
•	ရိုးသားကြိုးစား၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
•	To lead the Sales & Marketing Department •	Maintain the existing clients and hunting potential new clients •	Attaing the revenue target and aquisition for new and potential accounts •	Planning, developing and implementing effective marketing communication campaigns & promotions management •	Monitoring ongoing campaign spending against the budget , keeping accurate records and highlighting where variances occur. •	Undertaking detailed ongoing analysis of marketing campaigns to ensure targets are met. •	Routing plans ...
•	ဝနျထမျး (၅၀) ကြျောအား အုပျခြုပျပေးနိုငျသူ •	ဝနျထမျးမြားအား လုပျငနျးခှငျအတှငျး လုပျငနျးခှငျနှငျ့ ပတျသတျသော စညျးကမျးမြားလိုကျနာမှုရှိမရှိ သခြောစဈဆေးပေးရမညျ •	Site ပိုငျးဆိုငျရာ ကိစ်စမြား စီမံခနျ့ခ� ...
•	Company Product အကြောင်းအသေးစိတ် ရှင်းပြနိုင်ရမည်။ •	Customer များအား ယဉ်ကျေးချိုသာစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံရမည်။ •	လစာ အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ ညှိနှိုင်း
•	Computer, Internet, Email ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ISP လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	လစာ အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ညှိနှိုင်းမည်။
FTTH Installation Engineer
•	Telecom/ISP လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	FTTH & GPON knowledge ရှိရမည်။ •	လစာအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ ညှိနှိုင်း ပေးမည်။
153 Days, Full time , Telecommunications
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ Junior Accountant or Cashier
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ Audit Account	(part time)
Data Entry Admin, Secretarial & PA Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Netcore Internet Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Telecommunicatons Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Data Entry (Code-30218 )
Master Data & Business Intelligence Expert (IT)
Data Center Leader
Yangon Region 88 Days
Shan State 150 Days